Filoha RAVALOMANANA : « tokony mandroso hatrany … ny andininy faha-20 no manaraka » | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Filoha RAVALOMANANA : « tokony mandroso hatrany … ny andininy faha-20 no manaraka »
Nankasitraka ny fahavitan’ny volavolan-dalàna momba ny famotsoran-keloka ny Filoha RAVALOMANANA satria « efa mijaly loatra ireo voatana any am-ponja » hoy izy. Notsoriny kosa anefa fa tsy tokony mihemotra intsony ny fitondrana amin’ny fanatanterahana manontolo ny tondro zotra ka « mba ny andininy faha-20 no tanjona manaraka, izany no andrasan’ny vahoaka Malagasy maro an’isa ». Nanantitra ny fahavononany hifampiresaka ny Filoha RAVALOMANANA ary nampitainy tamin’ny vahoaka teo amin’ny Kianjan’ny Finoana fa efa nifampiresaka tamin’ireo tomponandraikitra iraisam-pirenena maro ny tenany ary nanamafy fa « tsy maintsy mifampiresaka aloha ny samy Malagasy ». « Mba hanamora izany anefa dia tokony any an-toerana ny tenako » hoy ihany ny Filoha.
Nanome toromarika ho an’ireo mpitari-tolona ihany koa ny Filoha RAVALOMANANA mikasika ny fomba firesaka sy ny lahateny ataon’izy ireo. « Tsy fotoanan’ny fifandrangitana mitarika fifandrafesana intsony izao » hoy izy « fa fotoana ampisehoana amin’izao tontolo izao sy ny mpanao politika rehetra fa vonona hifampiresaka isika ». Nijoro ho ohatra velona amin’izany ny tenany satria nazavainy tamin’ireo mpandala ny ara-dalàna fa ny tsy hanimbana ny fizotrin’ny fandrafetana ny lalàna mikasika ny famotsoran-keloka no anton’ny fahanginany herinandro maromaro izao. Farany dia nanentana ny vahaoaka Malagasy ny tenany mba hieritreritra lalina ny tolona izay nataon’ireo Raiamandreny tia tanindrazana tamin’ny taona 1947 indrindra amin’izao ankatokin’ny fankalazana ny andron’ny 29 Martsa izao. Nampanantena moa ny Filoha fa hifampiresaka matetika sy hifanakalo hevitra amin’ireo mpitolona mba hahitana haingana ny lalan-kizorana hanavotana ny Firenena iombonana.